Vady saropiaro : Nokapainy famaky ilay ramatoa!
Mpihiran’i “Jerusalema” : Hiseho eto tokoa ve ?
Azo ambara ho isan’ireo hira tena nalaza, raha tamin’ity taona 2020 ity, ilay hira afrikanina mitondra ny lohateny hoe “Jerusalema”, nohiran’i Nomcebo Ziko. Raha ny siosion-dresaka miparitaka dia toa ho avy eto Madagasikara ity mpihira ity, amin’ny faramparan’ny volana ôktôbra. Marina tokoa ve izany?
Herisetra Afa-jaza, nodakan’ny vadiny ilay ramatoa !
Fifamaliana sady narahina fiakaram-peo no nitranga tao amina tokantrano iray, ny zoma lasa teo. Lehilahy vao 23 taona no nifamaly tamin’ny vadiny, 21 taona. Tamin’ny fotoana nifamalian’izy ireo anefa dia ity farany nitrotro ny zanak’izy ireo vao 12 volana sady bevohoka.
Atao karazana case mitokatokana + sary dia asiana fond couleur angamba no mety amin’ito fa lava be ilay toriteny.
Fomba tsotra...manala ny lehilahy amin'ny fampirafesana Tsy tongatonga ho azy ny fampirafesana eo amin’ny lehilahy, fa misy antony miteraka azy. Rehefa fantatrao vadiny izay antony izay dia ianao irery ihany no afaka misintona azy ho afaka amin’izany.
Vehivavy 32 taona aho, manan-janaka lahikely anankiray, 5 taona.
Nisarahan'ny vadiko aho, efa herintaona izao. Mbola tsy miaraka amin’olona foana anefa aho satria mbola tiako izy. Ahoana ny fomba hanadinoako azy ?
Lova Renée sy Charlène Samy afaka CEPE !
Afaka CEPE soa aman-tsara i Lova Renée. Izy ilay zazavavy kely avy ao Toamasina nalaza nandritra ny fihibohana noho ireo horonantsara sy fanentanana nataony momba ny Coronavirus raha tsiahivina.
Halatra taova Namidy ny mason’ilay zaza
Zazalahy kely 6 taona no nisy naka an-keriny raha iny nilalao tao an-tokontaniny iny ary noesorin’ireo mpaka azy an-keriny ny masony.
Vakinankaratra: vata mangatsiakan'ny vadiny sy ny zanany 5 no novantaniny
Renim-pianakaviana iray 35 taona sy ny zanany miisa 5, izay vao 1 volana monja ny farany ary 10 taona ny zokiny indrindra, no hita faty tao an-tranony, ny zoma lasa teo, tao Maromandraisoa, Kaominina ambanivohitra Sahanivotry, distrikan' Antsirabe II .
Voaheloka higadra mandrapahafaty azy ny rangahy lehibe iray 78 taona, rehefa namono nahafaty ny vadiny noho ny resaka hasarotam-piaro.
Araka ny fantatra dia novelesiny tamin’ny famaky ny lohan’ilay vadiny, izay nitarika ny famoizan’ainy. Ho fiarovan-tena kosa dia nilaza ity voaheloka ho faty ity fa niahiahy ny vadiny ho manana olon-tiana izy, antony nitarika ny fifamaliana tao an-trano. Sorena mafy aho hoy izy satria tsy mety niara-natory tamiko intsony ny vadiko fotoana maharitraritra talohan’ny adinay. Tsy nety niray fandriana tamiko intsony koa izy ary tsy mety mifandray akaiky amiko na manao firaisana ara-nofo izany intsony. Ireo no nazavainy teo anatrehan’ny mpitsara omaly alakamisy rehefa nohenoina farany, mialohan’ny famoahana ny didy. Niaiky kosa anefa izy fa tsy mbola nahita maso ilay ramatoa vadiny niaraka tamin’olon-kafa. Efa tamin’ny volana jona 2011 no nisehoan’ity raharaha ity, saingy omaly alakamisy kosa vao nivoaka ny didim-pitsarana. Avy niandry faty izy mivady ireo tamin’ny alina namonoany ny vadiny. Nahatsikaritra ity rangahy lehibe ity fa nisy lehilahy nijerijery ramatoa vadiny tamin’izany ary tazany nisariaka tamin’izany olona izany ihany koa ilay ramatoa. Rehefa tafody tao an-tokantranony izy ireo, dia nifamaly ary niafara tamin’ny herisetra ka namelezan’ity rangahy lehibe ity ny vadiny tamin’ny famaky. Efa nivady nandritra ny 30 taona ireto mpivady ireto nialohan’izay famonoan-dralehilahy azy izay. Tao amin’ny tanànan’i Ayémé, ao Komo-Mondah any Gabon kosa no nisehoan’ny loza.